Wzọ 9 iji mee ka ihe omume B2B gị dị na mmemme Tech | Martech Zone
Ihe ọhụrụ na nchịkọta Martech gị: Software Management Software
Ndị na-eme ihe omume na ndị ahịa nwere ọtụtụ ihe ha ga-eme. Chọta ezigbo ndị ọkà okwu, ịkọwa ọdịnaya dị egwu, ire nkwado, na ịnye ahụmịhe pụrụ iche nke ndị bịara ya gụnyere obere pasent nke ọrụ ha kwa ụbọchị. N'agbanyeghị nke ahụ, ha bụ ọrụ ndị na-ewe oge dị ukwuu.
Ọ bụ ya mere ndị na-ahazi ihe B2B ji na-agbakwunye Ihe Omume Tech na nchịkọta Martech ha. Na CadmiumCD, anyị ejirila ihe karịrị afọ 17 mepụta ma na-eme ka ihe ngwanrọ kachasị mma maka nsogbu ndị na-eme atụmatụ mmemme.
Taa, anyị ga-agbaji ole na ole usoro nhazi ndị nwere ike ịkọwapụta na Omume Tech.
1. Na-anakọta & Nyochaa Ntinye Mgbakọ
Otu n'ime nsogbu kachasị B2B ndị na-eme atụmatụ ihe na-eche ihu bụ ịkọwa ọdịnaya dị ukwuu. Anyị chọrọ ndị ọkà okwu na-akpali ihe omume, na-akụzi ma na-atụrụ ndị bịara anyị ume. Ọ dị mkpa na okwu onye ọ bụla na-ekwu okwu dị na isi n’ozi anyị.
Kpọ oku maka akwụkwọ bụ ụzọ dị mma iji hụ na ọdịnaya dị mma maka mmemme gị. Ijikwa nnyefe niile ahụ adịghị mfe.
Nke ahụ bụ ebe Omume Tech abata. Na-agbakwunye ntinye na nyocha software, dị ka Mpempe akwụkwọ Mpempe akwụkwọ, na nchịkọta Martech gị bụ ụzọ dị mma iji jikwaa nnyefe niile ị ga-enweta.
Nwekwara ike ijikọ kọmitii nke ndị ọkachamara ụlọ ọrụ nwere ike nyochaa ntinye na ịkwado ọdịnaya. Nke a bụ isiokwu na kedu otu onye ọrụ jiri mee ka onye na-enyocha ya nyochaghachi na 100%
2. Jikwaa Ndị Pesky Speakers
Ozugbo ị họrọ ọdịnaya nke ihe omume gị, nsogbu ọzọ ga-esote ijikwa ndị na-ekwu okwu. Ndị na-ekwu okwu esiri ike jikwaa. Chọpụta ntinye site na email na spreadsheets bụ otu ụzọ isi mee ya, mana ọ dịghị mma.
Ihe bụ, ndị na-ekwu okwu nọ n'ọrụ. Ha na-abụkarị ndị ọkachamara n'ọhịa ha, ma nwee nnukwu ọrụ na-emetụtaghị mmemme gị. Ọtụtụ mgbe, a naghị akwụ ha ụgwọ ikwu okwu na mmemme gị.
Omume Omume dị ka Onye na-ewe ihe ubi nwere ike inyere gị aka ịchụso ihe mgbapụta ma soro ndị na-ekwu okwu gị rụọ ọrụ nke ọma. Ndị na-ekwu okwu ga-enwe ekele maka ya, n'ihi na ha nwetara ndepụta ọrụ dị mfe na ha (ma ọ bụ ndị na-enyere ha aka) nwere ike mezue mpempe akwụkwọ.
3. Atụmatụ & Oge Nhazi
Akwụkwọ ibe ya nwekwara ike ịba uru hazie ma hazie oge gi, ma ọzọ, ọ bụghị ezigbo. Ihe omume Tech na-enye gị ohere ịhazi ma wuo usoro ihe omume ị họrọ n’oge usoro nyocha gị. Nwere ike ekenye ndị ọkà okwu n'ọnụ ụlọ ngosi ma jikwaa ozi site na usoro njikwa ọdịnaya ihe omume.
Ihe kachasị mma bụ na nke a na-emelite ọdịnaya na ebe nrụọrụ weebụ gị na ngwa mmemme, yabụ ndị bịara gị nwere ohere ịnweta ọdịnaya na oge ọhụụ.
4. Ree Booth Oghere & Nkwado
Maka ọtụtụ ihe omume B2B, ego nkwụnye ego bụ otu n'ime akara dị mkpa nke ọma. Nke a na-agụnye ịme ihe ngosi ahia ma ọ bụ ịre ndị na-akwado ya ohere. Ndị a nwere ike ịbụ mgbasa ozi ọkọlọtọ dị mfe na weebụsaịtị gị, mmemme nkwado, ma ọ bụ ndịna na ụgbọ ala gị. Dijitalụ ma ọ bụ ọ bụghị - ndị na-eme atụmatụ nzute chọrọ ịbawanye ego ha nwere site na akụnụba ọ bụla ha nwere.
Ihe ịma aka bụ na nke a na-etinye nrụgide ọzọ na gị na ndị ahịa gị. Omume Tech na-ebelata nrụgide ahụ. Jackie Stasch, Onye isi njikwa nke Mmekọ Mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, na-eji Expo Harvester eme ihe nweta expo ahịa ịga nke ọma.
Ndị na-eme ihe ngosi na-enwe ekele maka ya n'ihi na ha nwere ike ịzụta oghere ụlọ ndò na ihe nkwado, wee nyefee ndị na-akwado ihe nhazi atụmatụ chọrọ n'aka ha, ha niile n'otu ebe. Maka ndị na - eme atụmatụ, nke a bụ ọnọdụ zuru oke iji chụsoo ihe omume ma debe taabụ maka ohere ndị ha rere.
5. Jikwaa Nkwukọrịta Tupu, N'oge, & Mgbe Omume ahụ
Na mgbakwunye na isoro ndị ọkà okwu na ndị gosipụtara banyere ihe aga-eme, ọ dị mkpa ịnwe ọwa kpọmkwem iji ruo ndị bịara ya. Omume Tech na-abịa site na iji nkwukọrịta rụọ ọrụ dịka email na ịkwaa ngwa ngwa. Nwere ike ịdepụta ndepụta nke dabere na ọrụ aga-eme ma zipụ ozi na ndebiri email emere tupu.
Enwekwara ngwaọrụ dika omumeScribe agbam ume nke na-enye ndị nhazi ohere ka ha na ndị ọrụ ha na ndị ọzọ metụtara ya na-ekwurịta okwu, nye ndị na-ekwu okwu ohere ka ha nweta ngwaọrụ dị mma maka ịnyefe ọdịnaya oge ikpeazụ, na izipu ndị bịara ya oge mgbe oge gbanwere.
6. Denye Ndị Na-eme Ihe Omume na Ihe Omume Onsite
Njikọ aka bụ nnukwu okwu okwu maka ndị na-eme mmemme ụbọchị ndị a. Ọ bụkwa ihe ndị ahịa na-achọsi ike. Vingkwọ ụgbọala ihe omume na-egosi na mmemme gị na-arụ ọrụ. Mkpakọrịta na ọdịnaya gị na ndị nwere oke ego gosipụtara ROI na ndị na-ahụ maka ime na ndị ọzọ.
Ndị a bụ ụzọ ole na ole ngwa ngwa iji tinye mgbakwunye Tech Tech na nchịkọta Martech gị nwere ike inyere ndị bịara ya aka:
Gbọ ahịa ahia na-egosi ụlọ ntu okporo ụzọ site na onye ọphu ẹphe achọ.
Dịkwuo ngwa doo na a otutu-ọwa Omume Tech ahịa obibia.
Kekọrịta ozi gbasara ọgbakọ na ịchụpụ ụfọdụ omume digital signage.
Nweta ezigbo nsonaazụ oge yana mmekọrịta gị na usoro nzaghachi ndị na-ege ntị.
7. Ekekọrịta ọdịnaya na ndị bịara
Ndị na-ere ahịa maara uru ọdịnaya dị. Ndị ahịa na-eji ihe omume B2B dịka akụkụ nke atụmatụ ha maara na ọtụtụ ọdịnaya na-eme na ezigbo oge na mmemme. Inwe uzo ijide ma kesaa ọdịnaya a ndi mmadu na ndi ozo abughi ihe di nkpa.
Na-agbakwunye Omume Omume dị ka nzukọ ọgbakọ na mmemme gị, wee kekọrịta vidiyo na-emekọrịta ọdịyo na slides na nchekwa data gị bụ ụzọ dị mma iji mee nke a. Inwe ọwa nkesa dị ka ihe omumeScribe Weebụsaịtị na Ngwa dịkwa mkpa.
Ọtụtụ ndị bịara ga-ebudatara ngwa ahụ, yabụ ihe niile ị ga - eme bụ izipu ozi ntinye ma ọ bụ email na voila !, ndị debanyere aha gị nwere ohere ịbanye na ọdịnaya ọgbakọ gị niile. Ọ dị ka iwere nnọkọ ogbako gị ma weghachite ha dị ka iri ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ narị webinars!
8. Chịkọta & Nyochaa Nsonaazụ
Ihe omume B2B kachasị mma bụ ihe omume na-eweta data. Gbakwunye Omume Tech na nchịkọta Martech gị nwere ike inyere gị aka ịghọta ihe ọhụrụ na mkpesa gị. Ndepụta ngwa nbudata, nbudata ọdịnaya, nchịkwa mmadụ, na ndị ọzọ dị mfe site na ngwaọrụ dị ka myCadmium, ọmụmaatụ.
Achịkọta data sitere na ndị bịaranụ na-eme ka ọ dị mfe site na nyocha ọgbakọ dị ka Nyocha Igwe Ọdụdọ. Ndị na-eme ihe omume na ndị ahịa nwere ike iji data a mepụta ngwaahịa ọhụrụ, melite ahụmịhe ndị bịara, ma ọ bụ chọpụta mkpa ọdịnaya maka ọdịnihu ha.
9. Họrọ Ndị nnata onyinye
Mmemme mmemme bụkwa akụkụ buru ibu nke mmemme B2B. Mata na ịmata ndi isi ulo oru, dịka ọmụmaatụ, bụ ụzọ dị mma iji bụrụ onye ndu echiche ma gosipụta izi ezi nke ihe omume B2B gị. Ihe ịma aka na-edozi site na ntinye niile na ịhọrọ ndị ziri ezi.
Ihe omume Tech, dị ka Scorecard Awards, bụ nnukwu mgbakwunye na mgbakwunye Martech gị. Ọ na-enye ndị nhazi na ndị ahịa ahịa ohere jikwaa nnyefe, nye ndị ọka ikpe ka ha nyochaa otu dị iche iche wee họrọ ndị nnata dabere na nzaghachi mkpokọta.
Dịka onye nhazi ihe omume ma ọ bụ azụmaahịa, ị ga-enwerịrị nchegbu. Dinggbakwunye Omume Tech na nchịkọta Martech gị bụ ụzọ dị mma iji nakọta, jikwaa, yana kesaa ọdịnaya na ndị niile metụtara ya.
Ihe omume Tech na-eweta ihe omume B2B gị, na-eme ka ọrụ mmemme gị na-echekwa oge na ego gị.
Nweta ego maka emume gị ọzọ
Tags: usoro nzaghachi ndị na-ege ntịnjikwa onyinyeenọụlọ ahịa ahịacadmiumcdogbako enọnzaghachi ogbakoogbako ubiogbako nyochannyefe nke ogbakodigital signageomume enọnjikwa ihe omumemmemme njikwa ihe omumeihe omume kọwaajikwaa ihe omumeatụmatụ sessionsscavenger ichu ntannọkọusoro ihe omumenjikwa okwuọkà okwu akaramagnet nyochamekọrịta slide
Michael Doane bụ onye edemede, onye na-ere ahịa, yana onye nrụpụta weebụ nke dabara na ụlọ ọrụ ihe omume. Na Cadmium CD ọ na - akuzi ndi nhazi ihe banyere uru nke Tech Tech. Nweta otu n'efu ya Ọganihu Na Omume Tech, iji mụta otú Omume Tech nwere ike isi mee ka ihe omume B2B gị ka mma.
Ihe ịma aka ndi oru ahia ise kacha elu (na otu esi edozi ha)
Ndi Mgbasa ozi mmemme na-azụrụ igbu aha gị?